5211 पटक पढिएको
त्यो रात आँखा झिमिक्क हुनै सकेनन् । घरि यता घरि उता ओल्टोकोल्टो फेरिरहेँ । घरपरिवारलाई त बल्लबल्ल मनाउन सकेँ । समाजलाई मनाउने काम कसरी सम्भव छ ? आफैंसँग उत्तर खोजिरहेँ । यसै त कुरा काट्नेहरूको कमी छैन गाउँमा, झन् मैले त्यसो गरेँ भने त ? दिउँसोको भेलामा भन्नेहरूको कुरो सुन्दा एकदमै सही लागेको विषयलाई अब म समाज सम्झेर कसरी गलत भनुँ ?
आमाहरूको त कुरै भएन । दिदीहरूले पनि नगरेको कुरो मबाट ? म आफैंभित्रको उत्तर खोज्छु । जहाँ प्रश्नैप्रश्नको भँमरी छ त्यहाँ मैले उत्तर कसरी पाउनु ?भेलामा एकजना सरले भन्नुभएको थियो, ‘मौका आउँछ पर्खंदैन, बगेको खोलो फर्कंदैन ।' टेलिभिजनमा फेसन शो गर्दा हुने, सहरमा त्यस्ता लुगा लाएर बजारभरि घुम्न हुने तर मैले जाबो त्यत्ति गर्न नहुने ?
भाले बास्यो, ‘कुखुरी काँ... !' गाउँभरिका अरू भालेहरूले त्यो भालेलाई साथ दिए, ‘कुखुरी काँ...!' अहा ! मलाई पनि समाजका धेरैले यसैगरी ‘तेरो काम ठीक छ अघि बढ्' भनेर साथ दिए... । मनमनै धेरै खुसी हुन्छु म । ‘तँ चिता म पुर्‍याउँछु' भन्दै हजुरआमाले मावल गएको बेला भन्नुभएको थियो । हो, मैले चिताएको छु, अब त्यसै गर्नुपर्छ । नत्र त म सधैं घरमै कोचिने भएँ । धेरै भए स्कुल पुग्छु । यतिमात्र त संसार होइन नि ? प्रश्न तेस्र्याउँछु ।
भेलामा भनेका कुरा सुन्दा त संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, म भने कुवाकै भ्यागुत्तो ! मैले केटाहरूले मात्र फुटबल खेलेको देखेकी थिएँ । एक्कासि हिजो भेलामा फुटबल खेल्ने कुरा त सपनाजस्तै लागेको थियो । फुटबल ! त्यो पनि खुला चउरमा ? खुला चउरमा त फुटबल खेल हेर्नेहरूको भीड नै लाग्छ । चउरवरिपरि भएका मान्छे नै मान्छेसामु टिसर्ट र कट्टु लगाएर म...! ? बाफ रे...! मैले आजसम्म घर, परिवार र समाजको मर्यादा नाघेकै छैन । कुर्ता, सुरुवाल र सलले अनुहार र पैतालाबाहेक सबै ढाक्थ्यो ।
ममात्रै होइन, गाउँका अरू केटी साथीमा पनि यो हिम्मत मैले देखेकी छैन । हैन, आज हामी सबै टिसर्ट र कट्टुमा ? त्यो पनि एक÷एक घन्टा खुला चउरमा ? हे भगवान्... । ‘रिंकु, ए रिंकु..., आजदेखि फुटबल खेल्न जाने भनेको होइन ? खै कहाँ छे यो ? उठेकै पो छैन कि कसो ? लौन ढिलो भो है । छिटो तयार हो', आमाले भान्छाकोठाबाटै कराउनुभयो । ममा अचानक ठूलो साहस भरियो । हो, म चिताउँछु, भगवान्... पुर्‍याऊ है ।लगाइरहेका लुगा हत्तपत्त फुकालेँ । संस्थाले दिएको टिसर्ट र कट्टु लगाएँ । फटाफट तल ओर्लिएँ । भान्छाकोठातिर हेर्ने आँट भएन, आमाले देख्नुहोला भनेर । आमाले सुन्ने गरी भनेँ, ‘आमा, म गएँ है ।'
‘खै हेरुँ मेरी छोरी कस्ती भै छ', आमाले जिज्ञासा देखाउनुभयो, ‘चिया पिउँछे भनेर ठिक्क पारेको त... ।' ‘खान्नँ, म त गइसकें...', छोटा लुगामा आमाको अगाडि पर्न मलाई शरम भएर बाटोमा पुगिसकेकी थिएँ । ‘होइन त्यो केटी को रै'छे', छिमेकी हजुरआमा बुहारीसँग सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, तर म सुनेको नसुन्यै भएर हिँडिरहेँ । सबै छिमेकीले मैतिर हेरेको र कुरा काटेको जस्तो लाग्यो । मैले नौ वर्षसम्म धेरै परीक्षा दिएँ, तर आजको परीक्षामा पास गर्न धौ-धौ भइरहेको थियो मलाई।
सबैले मतिर हेरेको जस्तो लाग्यो । अब त म कतै हेर्दिनँ भन्दै खुइँखुइँ बाटो तताएँ । चउर पुगेँ, केटीहरू त अघि आइसकेछन् । सबैलाई त्यस्तै भएछ बाटोभरि । हिजो भेलामा सिकाउने नयाँ सरहरू, म्यामहरू सबैले फुटबल खेल्ने वातावरण बनाइसक्नुभएको रहेछ । हामी भने एकअर्काको मुख हेर्दै हाँस्न थाल्यौं ।
सिठी बज्यो । गोल (फुटबल) मैदानमा यताउता गर्न थाल्यो । म पनि गोलकै वरिपरि उताउता दौडिरहेँ । थाहै नपाई झन्डै एक घन्टा चउरवरिपरिका त्यत्रा मान्छे बिर्सेर खेलेछौं ।मेरो शरीर त चंगाजस्तै हलुका भएको महसुस भयो । घर पुगी खाएर स्कुल हिँडिहालेँ । साँझ खुट्टा दुखेको र थाकेको महसुस भयो ।आमाले खुट्टा मिचिदिँदै भन्नुभयो, ‘चिन्ता नगर, दिनैपिच्छे खेल्न थालेपछि सबै ठीक हुन्छ । अनि छिमेकीले केही भनेनन् आमा ? ' ‘समाज र दुनियाँले के भन्छ, त्यसको पछि नलाग छोरी, राम्रो काम गर्दै जा ।'
मलाई पनि लाग्यो, क्लब, संस्था, भेला एकतामा शक्ति हुँदो रहेछ । आमाले भनेर के गर्नु ? स्कुल पुग्दा केटा साथीले जिस्काउन थाले । गाउँतिर हिँड्दा छिमेकीले पनि जिस्काउन थाले । तर जे भए पनि उनीहरूका अगाडि लाज लागेको कहीँकतै देखाइनँ ।आफूविरुद्धका कुरालाई सुनेँ, तर सामान्य ठानेर अर्को कानबाट उडाइदिएँ । ‘आमा, बुबा... फुटबलमा म जिल्ला टप भएँ ।'
‘हँ, के रे फेरि ? फुटबलमा जिल्ला फस्ट ? ', बुवा, आमा दुवै खुसी हुँदै दौडिँदै आएर मलाई अँगालो हाल्नु भो । रात पर्न लागेको थियो, तर मेरो मन बिहानको उज्यालोजस्तै भइरहेको थियो ।
हात्ती गाउँ पसेपछि स्थानीयमा त्रास 609